डिजिटल युगमा यूवा नेतृत्वका चुनौतीहरु – Nepalpostkhabar
डिजिटल युगमा यूवा नेतृत्वका चुनौतीहरु
नेपालपाष्ट खबर । १३ असार २०७८, आईतवार १७:१० मा प्रकाशित
अब प्रश्न उठ्न सक्छ – उमेर र नेतृत्वका बिचमा समानुपातिक वा व्युत्क्रमाणुपातिक कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? उमेर बढ्दै गयो भने नेतृत्वको प्रभावकारिता बढ्दै जान्छ वा घट्दै ? अनुभवले समृद्ध भएर काम गर्न सजिलो हुन्छ वा उही र उस्तै काम बारम्बार गरिरहँदा थकान, बोझ र दिक्दारी पैदा हुन्छ रु मेरो विश्लेषण छ कि उमेर र कामको प्रभावकारिताको बिचमा समानुपातिक सम्बन्ध छैन। धेरै उमेर बढ्दै जाँदा कामको प्रभावकारिता घट्दै जान्छ। जीव वैज्ञानिक आँखाबाट हेरौँ वा समाज वैज्ञानिक । यसका बारेमा पनि हामी गहन छलफल गर्न सक्छौँ। यदी हामी राम्रोको खोजीमा छौँ भने पूर्वाग्रही किन हुने रु तर, हामीसँग जबर्जस्त दुईवटा समस्याहरू नेतृत्वका बारेमा छलफल हुँदा उठ्ने गरेको छ। युवा नेतृत्वले भन्छ कि अब बुढाहरूको काम छैन। पाको नेतृत्वले भन्छ कि यी त बच्चै छन्। सारतः दुवै पक्षले एकअर्कालाई काम नभएको भन्छन्। हुनुपर्ने हो कि नेतृत्वको योजनाबद्ध विकास। पूरानोको अनुभव र नयाँको सिर्जनशीलता दुवैलाई जोड्ने। रणनैतिक सवालमा पूरानोको भूमिका बढाउने र कार्यकारी भूमिकाहरूमा नयाँ टिमको अभ्यास गर्ने। एकले अर्कालाई निषेध होइन कि पुरकको भूमिका निर्वाह गर्ने। के हामी नेतृत्व प्रणालीमा नयाँखाले अभ्यास गर्न सक्छौँ रु सक्नुपर्छ।
युवा नेतृत्वले आजको दुनियाँमा नेतृत्व विकासको लागि के–के गर्नुपर्ला ? पहिलो काम हो – विचारको विकास, दृष्टिकोणको निर्माण। नेतृत्वले मूलतः नीतिको अगुवाइ गर्ने हो। कस्तो नीति सही नीति हो भन्ने त थाहा हुनुपर्‍यो नि। नेतृत्वले समयको पदचाप बुझ्नुपर्दछ र अगाडि अगाडि हिड्नुपर्दछ। जनता सँगसँगै तर अगाडि। जस्तो अहिले हामी डिजिटल युगमा छौँ। प्रविधिले मान्छेलाई विस्थापित गरिरहेको छ। कामको अन्त्य भइरहेको छ। रोबोटले बिरामीको शल्यक्रिया गर्दछ, घरको नक्शा बनाउँछ, बारीमा खेतीपाती गर्दछ, विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछ, कारखानामा जुत्ता उत्पादन गर्छ। डाक्टर, इञ्जिनियर, किसान, शिक्षक र मजदुरलाई विस्थापित गरिरहेको छ। यसप्रति पीठ फर्काएर र ओठ लेब्य्राएर हिड्ने मान्छे मैले देखेको र भेटेको छु। अँ यस्तो त हुँदै गर्छ भन्ने। हुलाक कहाँ गयो आजकाल रु के कसैले आराम छु आराम चाहन्छु भनेर चिट्ठी लेखिरहेको छ रु इमेलले हुलाकलाई सर्लक्कै निलिसक्यो। इमेल उम्दा अवस्थामा छ भने हुलाक मृत्युको दिन गनेर बसिरहेको छ। ट्याक्टरले गोरु, राँगा र घोडाले जोत्ने खेतको हलो, फाली र जुवा उप्काउँदै लगिरहेको छ। तेलमिलले कोल र कुटानी मिलले पानी घट्ट निल्दै गइरहेको छ। कुनै दिन आउनेवाला छ, काँसको बञ्चरो, हाते चर्खा, हुलाक, हलो, कोल र घट्ट एकै ठाउँमा भेटिने वाला छन् अर्थात् संग्रहालयमा। अरु के–के थन्कने छन्, संग्रहालयमा हामीले सूचि बनाएका छौं रु अहिलेसम्म वस्तु मात्रै थन्किएका थिए, अब मान्छेको पेशा पनि थन्कियो भने रु यही हो कामको अन्त्य भनेको। के परिणाम आउला रु अकल्पनीय। जीवाश्मा इन्धनको युग समाप्त हुँदैछ र नवीकरणीय उर्जाको युग शुरु हुँदैछ। उर्जामा हुने क्रान्तिका बारेमा हाम्रोमा खासै बहस भएकै छैन। निःशुल्क उर्जाको परिणाम के होला ?
(आचार्य माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा समाजवाद अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन्।)